Eo ampiandrasana ny 26 Jona 2011 – MyDago.com aime Madagascar
Eo ampiandrasana ny 26 Jona 2011
Miraondraona ny « baoty »
Misasaka ny volana Jona, ary atomotra ny « parady » tokony hifandrombonan’ny bebaoty ho fanehoana ny maha-iray azy ireo. Fiverenan’ny fahaleovantena no ho marihina amin’io 26 Jona efa nahazatra hatrizay io. Mingonongonona anefa ny any an-dakazera any satria misy ny manambara fa tsy misy dikany ny fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena raha ny hery vahiny no tsy maintsy manondro ny lalan-kizoran’ny firenena.
Handray andrikitra ?
Tsy azo ekena ny fanamparam-pahefana mifototra amin’ny tsikombakomba mandrendrika ny firenena ataon’ny mpahazo tombotsoa amin’izao krizy politika eto amin’ny firenena izao, hoy ny andiana manamboninahitra tanora (izay iniana tsy ho soratana eto, na dia tsy te-hiafina intsony aza izy ireo). Misy ireo zoky tsy manana saina ho miaramila sy miara-miventy ny fiarovana ny firenena sy ny tanindrazana, ka minia mikimpy noho ny tombotsoa manokana. Tsy maintsy hanao matso izany ny bingo ? Nanamarika moa ny mpitarika ireto andiana manamboninahitra ireto fa tokony ho anjaran’ny mpanao politika irery ihany ny fikatsahana ny vahaolan’ny firenena. Tsy tokony hampiasain’ny mpitarika ny tetezamita hampitombo tanjaka azy eo amin’ny ady hevitra ara-politika ny tafika fa manjary manova ny fifandanjan-kery ara-politika.
Tsy mivonona ny hanao politika ny tafika malagasy, kanefa ny mpitarika politika nomen’ny vahoaka ny fahefana no tokony hohajaina sy hakantoavin-teny. Miharihary aminay, hoy hatrany ry zareo, ny fihetsiky ny SADC farany teo raha nandray ny delegasiona Malagasy isan-tokony avy. Tsy misy maha-solotena ny vahoaka malagasy ireny na iray aza. Porofon’izany dia teo anatrehan’ny filoha roalahy Afrikana nitarika ny fivoriana dia tsy nisy nataony tombo sy hala. Efa hita miharihary koa ankehitriny fa mila mi tafika ny fampodiana ny filoha teo aloha mirahalahy, ary tokony hitandro ny filaminana amin’ny hery tsy miangatra.Koa hambakan’izany ve ny tafika sy ny tandro aron’ny vozona malagasy, hoy ry zareo mamarana ny teniny.
Vina ho amin’ilay 11 Jona 2011
Ny HMF sy ny olan’ny firenena ankehitriny
Auteur Ony RambeloPublié le 13 juin 2011 Catégories Malagasy, Négos, Politique
2 réflexions sur « Eo ampiandrasana ny 26 Jona 2011 »
13 juin 2011 à 19 h 51 min
Dia ho sahinareo tafika ve ny mbola handrara ny fodian’ny Filoha teo aloha ireo, nohon’ny VOLA BETSAKA efa azonareo?. Dia ho sahinareo ve ny hikipy ka mbola hanaraka hatrany ny hevitry ny FATn’alika izay efa nalohan’ny vahoaka?
Tandremo fa sao dia ianareo indray no hanimba ny firaisankinan’ny samy malagasy satria hitsabaka amin’ny resaka politika!
Sao mantsy ho arovan’ny tafika avy amin’ny UA na ny ONU ireo Filoha ireo rehefa hody an-tsanindrazana ka hilaza indray ianareo hoe « f’angaha izahay tsy afaka miaro azy no tafika avy ivelany no asainareo manao an’izany »?
TADIDIO TSARA FA NA INONA FIHETSIKAREO NA INONA FOMBA ATAONAREO, DIA TSY MAINTSY TAFODY IREO SATRIA ANDRIAMANITRA MIARO AZY, INDRINDRA NY FILOHA MARC RAVALOMANANA!
ny antso avo no hataoko ho an’ny tafika!miverena amin’ny déonthologie maha neutre sy tsy manao politika anareo,aza matim-bola fa rendrika noho izany ny tanindrazana zay imatimatesanareo fa arovanareo,aza miandany amin’ny ratsy fa zay image-n’ireny no manjary image nareo,ampy izay naha grande muette izay fa mijoroa arovy ny tanindrazanao ary ampanjakao eto ny lalàna manan-kery nianaranareo.tsarovy fa ny vahoaka no miasa mafy sy mandoa hetra hivelomanareo ary mametraka ny fatokisany aminarteo izy matoa mbola tsy mandray basy sy fitaovam-piadiana,ka mieritrereta tsara ary mihevera tsara zay hiafaran’ity tanindrazantsika malalantsika ity.
Précédent Article précédent : Miady an-trano ny FAT
Suivant Article suivant : Sary famaranana ny fivoriana teto Sandton